Casharro: Abuur, otomatig oo keydso ficilada Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Casharkaan waxaan ku arki doonaa qaab fudud sida loo abuuro, otomaatiga loo dhigo loona kaydiyo shaqooyinka barnaamijkeena Photoshop. Abuurista ficiladu waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh gaar ahaan markaan la shaqeyno tiro badan oo mashaariic isla markaa isla markaana waxaan u baahanahay inaan si isku mid ah u wada dalbanno qaab, saameyn ama isku hagaajin.
Illaa iyo hadda waxaan aragnay ficillo loo yareeyay abuurista saamaynta sawir, midab, isbarbaryaac, xamaasad ... laakiin qalabkan Photoshop wax badan ayey u adeegtaa taas awgeed, waxay u adeegtaa inay badbaadiso dhammaan noocyada habraacyada iyo hagaajinta ee Photoshop ay gacan ka geysan karto halabuurkeenna. Xaaladdan oo kale waxaan arki doonaa sida loo abuuro ficil saameyn ku leh habka keydinta ama wax looga beddelo qaabka sawirradeena. Waxa aan sameyn doono waa inaan raacno habraac aan ku keydinayno sawiradeena qaab TIFF ah, oo aad waxtar u leh in laga shaqeeyo badalida feylka
Abuur ficilo: Ficil waa adeegsiga saamaynta iyo xulashooyinka Photoshop qaab kooxaysan oo otomaatig ah iyo hal guji. Si looga shaqeeyo ficil waa inaan ka shaqeynaa dhammaan waxyaabaha ka kooban Tusaalaha casharkaan, waxyaabaha lagama maarmaanka ah ama talaabooyinka waxay noqon doonaan kuwa habka badbaadinta ah. Si kastaba ha noqotee, haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan abuurno ficil leh saameyn gaar ah ama midab leh, waa inaan ka shaqeynaa mid kasta oo iyaga ka mid ah isla waqtigaas oo arjiga uu duubayo dhammaan dhaqdhaqaaqyadeena (waxaan ku hubin karnaa markaan aragno badhanka Rec ama duubista ee gudaha casaan).
Waxaan soo dhoofsan doonnaa sawirka aan ku shaqeyn doonno oo aan ku furi doonno adiga oo laba jeer gujinaya astaanta qufulka.
Waxaan aadi doonnaa Daaqada> Ficillada menu iyo daaqadaha ficil-celinta ayaa ka muuqan doona nidaamyadooda (waxaan sidoo kale ku heli karnaa daaqaddan adoo riixaya Alt + F9). Waxaad ku arki doontaa daaqadaas pop-up-ka inuu jiro liis ama jadwalka saamaynta. Kuwani waa la adeegsan karaa oo waxay ku imaan karaan si caadi ah dalabkeena, laakiin xaaladdan waxaan ka shaqeyn doonnaa abuurista saameynteena.
Waxaan gujin doonnaa badhanka ku yaal geeska midig ee kore oo waxaan dooran doonaa ikhtiyaarka «Abuur koox». Sidan oo kale, hawsha oo dhami waxay noqon doontaa mid nidaamsan isla markaana daqiiqadaha aan dooneyno inaan helno saameynta aan ku soo saarnay xulashooyinkeeda iyo waxyaalaheeda oo dhan waxay ahaan doontaa muuqaal ahaan mid aad u fudud. Markii aan riixno badhankan, daaqad soobaxda ayaa ka muuqan doonta meesha ay tahay inaan ku magacawno kooxdeena.
Haysashada xulashada galka cusub ama kooxda lagu sameeyay gudiga falalka, waxaan dib ugu laabaneynaa badhanka ku yaal geeska midig ee kore waxaana dooran doonaa ikhtiyaarka «New action». Xaaladdan oo kale waxaan ku magacaabi doonnaa "TIFF Format" ficilkeenna cusub.
Xilliga aan fiirineyno ficilkeena, badhanka recka ayaa casaan noqon doona, tani waxay ka dhigan tahay in Adobe Photoshop uu duubi doono nidaamka oo dhan si buuxda si loo abuuro ficilkeena.
Marka xigta waxaan ku keydin doonnaa dukumiintiyadayada qaab TIFF ah oo raacaya dhammaan tillaabooyinka si markaa ay si macquul ah ugu keydsan yihiin taariikhda waxqabadkeenna. Waxaan aadi doonnaa Faylka> Keydso ... oo waxaan dooran doonnaa qaabka TIFF. waxaan gujin doonaa aqbalida.
Isla markiiba waxaan aadi doonnaa badhanka JOOJI si aan u joojino duubista ama badhanka midig ee kore ee ficilka oo aan gujino «Jooji duubista».
Haddii aan eegno gudiga falalka waxaan arki doonaa sida hada galka ama kooxda gudaheeda aan ku abuurnay ficilka "TIFF Format" uu u muuqan doono mid xambaarsan iyo xogta talaabada lagu sheegay hoostooda.
Otomaatiga falalka: Sida magaceedu tilmaamayo, nidaamkani wuxuu naga caawin doonaa si aan kala sooc lahayn u adeegsanaa ficiladeena qadar aan xadidneyn dukumiintiyada ama feylasha qaab .psd ah.
Si aan toos ugu dalbanno ficilkeena tirade aan xadidneyn ee dukumiintiyada ama mashaariicda waxaan kaliya u baahanahay inaan tagno faylka faylka> Awoodda> Dufcadda ...
Daaqaddan gudaheeda waxaan ku arki doonnaa ikhtiyaarka loo dejiyey halka ay tahay inaan ku dooranno galka ay ku jirto ficilkeenna iyo ficil ahaan waxaan soo bandhigi doonnaa tab si aan u xusho ficilka aan dooneyno inaan keydinno. Waxaan dooran doonnaa falka »Qaabka TIFF».
Xulashada "Origin" waxaan ku dhaqaajin doonnaa xulashada galka waxaanna gujineynaa badhanka "Dooro ...". Daaqad hagitaan ayaa soo muuqan doonta waxaana raadin doonnaa galka ay ku jiraan dhammaan sawirada aan dooneyno inaan ku dabaqno ficilkeena.
Waxaan gujin doonnaa Aqbal dhamaan sawirada ama sawirada galka la xushay ee kujira codsigeena ayaa si toos ah u soo muuqan doona. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagu keydin doonaa qaabka TIFF oo si toos ah ugu jira galka macluumaadka.
Kaydinta iyo kaydinta ficilada: Talaabadani waxay naga caawin doontaa inaan la wadaagno ficilkeena oo aan u isticmaalno qaab aan ugu adeegsan karno mashaariicda kale, kombiyuutarada kale ama aan kula wadaagi karno shabakada inay yihiin ilo.
Si aan ugu kaydino ficilkeena kumbuyuutarkeena waxaan kaliya u baahnaan doonaa inaan tagno badhanka midig ee sare ee ficillada oo aan doorano ikhtiyaarka "Badbaadinta ficilada", daaqad pop-up ah ayaa si otomaatig ah u soo muuqan doonta waxaana dooran doonnaa meesha loo socdo
Waxaan dooran doonnaa magaca ficilkeena waxaana si toos ah loogu keydin doonaa kordhinta .atn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Cashar barasho: Abuur, otomaatig, iyo keydinta ficilada Photoshop
Thanks Fran !!
Salaan, waad ku mahadsan tahay wadaagista aqoontaada, waxaan kuugu hambalyeynayaa dadaalka lagu sameeyay horumarinta casharrada.
Ogaanshaha ayaa naga dhigi doonta inaan noqono oo aan ku baraarugno.